Michael Marquart na-agbanye Envelopu nke Imirikiti Audio | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Mmepụta Ihe » Michael Marquart na-agbanye envelopu nke ihe omimi
Ya cinematic album tọhapụrụ A Bad Think's "Lifelike" jiri Sennheiser AMBEO VR Mic na Neumann KU 100 binaural head
Michael Marquart gara aga echiche album Onye Nzoputa, weputara na 2019 n’okpuru oru ngo ya nom de plume A Bad Think, weghaara nhọpụta Grammy maka Best Immersive Audio Album yana oke nkatọ dị ukwuu. Inwe 'uto nke ihe ga - ekwe omume' site na imepụta ihe ntanetị nke na Onye Nzoputa, album ya kachasị ọhụrụ, Lifelike, na-ahụ onye na-ese ihe na-agbanye ókè nke ụda immersive ọbụna n'ihu.
N'oge a na-edekọ na Henson Studio D, Michael Marquart tinyere Neumann KU 100 binaural isi, nke a na-eji microphones Neumann U 47 nke vintage abụọ. E debere AMBEO VR Mic n'elu. Foto sitere n'aka Michael Marquart
Isetịpụ ntọala maka AMBEO na egwu miri emi
Na mbido 2020, Marquart gbara akwụkwọ na Studio D nke Los Angeles'Henson Studios' nke akụkọ ifo, yana injinịa Dave Way na isi nke usoro ihe nchekwa SSL 4072G, iji malite nyocha na Lifelike. "Echere m, 'olee otu anyị ga - esi mee nke a, gịnị ma ọ bụrụ na na ọba egwu a ka anyị na-amalite na ọkwa ala na gburugburu 3D - na-eji Neumann KU 100 the AMBEO Mic?" ka Marquart na-ekwu. Ọ na-echeta ị listeninga ntị na ngosipụta ngwakọta ihe na NAMM ihe ngosi afọ ole na ole gara aga: “Echere m na, ọ bụrụ na onye na-ege ntị nwere ike ịnụ ihe dịka nke a ọ ga-adị mma. Egwú nwere ike ịmalite, nke a tọkwara ụtọ; ya mere, ebe ahụ ka m chọrọ ịga na nke a niile. Ihe ndị m chọrọ iji egwu na-emetụ emetụbeghị na mbụ. ”
Umuaka egwu nke Lifelike abuana ihe na-erughi okpukpu atọ, nke edobere na onwa onwa. "Dabere na egwu nke anyị na-edekọ, anyị ga-eji otu ma ọ bụ abụọ nke ngwa ịgba ahụ iji hụ ụtọ ụtọ egwu ahụ," Marquart na-akọwa. Ma Neumann KU 100 binaural isi na Sennheiser AMBEO VR Mic ka edobere n'etiti ụlọ ahụ, ebe KU 100 rụtụrụ aka na usoro 'isi', nke dị n'etiti ọkara ọnwa.
Inwe oghere 3D na Sennheiser na Neumann
Na mgbakwunye na KU 100, a na-eji ọtụtụ ihe ndị ọzọ Sennheiser na Neumann mics n'oge egwu dị egwu, gụnyere Neumann U 47 FET nnukwu diaphragm condenser na kick drum na ọtụtụ Sennheiser MD 421 II microphones na-arụ ọrụ na toms. Ọzọkwa, a jiri ụzọ vintage U 47 tube mics jikọtara ọnụ na-atụgharị 'igwe okwu ntị' nke KU 100. "Neumann mics bụ ndị kachasị mma, yabụ na anyị nwere ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile!" Marquart obi. Site na ịdekọ na 3D na mbido, ndị otu Marquart nwere ike ịmepụta ntụgharị okwu ziri ezi nke abụ ọ bụla dịka a na-eso ya, kama ịdabere na ịgwakọta iji mepụta ahụmịhe.
“Laa azụ n’ụbọchị ahụ, ịnwere ike ịdekọ ihe n’ụdị ọdịnala wee mebe ngwakọta Atmos ma ọ bụ Gburugburu ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana ugbu a anyị bụ ndekọ ọnọdụ a nwere akụkụ atọ - ọ bụghị naanị ịgwakọta, ”ka Marquart na-ekwu. Offọdụ n'ime abụ ndị ọhụrụ gosipụtara King Crimson onye na-akpọ ọkpọ Jeremy Stacey, onye dọtara ya na 3D mics, na-agagharị na gburugburu ha ma na-atụnye akụkụ egwu: "Ọ nọ na-akụ nke a, na-akụ na nke ahụ. Ọ dị ka ọ dị jụụ, n'ihi na ọ dị ka ụda na-esi na mberede, "ka Marquart na-ekwu. "Na-esote ndị Ku 100, anyị nwere a matched ụzọ abụọ Devid agụghị ndị gbara Neumann U 47s."
Ọ bụ ezie na ejiri KU 100 na AMBEO VR Mic were rụọ ọrụ na egwu iji mee ka egwu ọ bụla buru ibu karịa ndụ, ndị na-emepụta ihe jikwa ha na guitars. “Anyị ji Neumann KU 100 na AMBEO Mic na egwu guitar ọ bụla, belụsọ nke m. E guzobere ha ma ọ bụ obere ka ha dị ka mics iji weghara ohere ahụ, ”ka Marquart na-ekwu. Duru guitars na Lifelike bụ ndị Fernando Perdomo na Kirk Hellie na-elekọta, “[Fernando na Kirk] bụ ndị egwuregwu na-apụ apụ ma dịkwa mma na ihe ha na-eme, na enwere ụlọ niile dị n'ụwa maka ha. Ana m eme ụbọ akwara m, hapụzie m ọtụtụ ebe ka ha ga-egwu, ”ka ọ na-agbakwụnye.
Na album ọhụrụ ya bụ Lifelike, Michael Marquart jiri ọtụtụ mics dekọọ guitars, gụnyere Neumann KU 100 na Sennheiser AMBEO VR Mic. Foto sitere n'aka Michael Marquart
Edere ihe ndị a na-ahụkarị na Marquart na-eme ka a na-eme ihe nkiri guitar nke onwe ya na-eji vinteji Neumann U 47 igwe okwu igwe okwu edobere na ọnọdụ Omni, nke dị ihe dị ka 3-1 / 2 'site na guitar.
Gwakọta na ịmụta a masterpiece nke ọhụrụ
Bob Clearmountain jidere stereo na 5.1 mixes, ebe Steve Genewick na Dave Way jikwaa ngwakọta Dolby Atmos na Los Angeles'Capitol slọ nka. All ngwakọta ikpeazụ bụ Bob Ludwig nke Gateway Mastering Studios. Marquart kwuru, sị: “Isoro ndị m tụkwasịrị obi rụkọọ ọrụ na-ebelata nrụgide m nile. Ntọhapụ Blu-Ray ga-agụnye ngwakọta ndị a niile, yana akwụkwọ akụkọ 22 nkeji na-egosipụta ime ndekọ ahụ.
Nkà, Lifelike bụ nnọọ eke na ala ndekọ, mgbe ọrụ ndị kasị ọkaibe na ịma aka ọdịyo usoro. "Ana m agbalị ịmanye teknụzụ ma mee ihe a na-emetụbeghị mbụ maka onye na-ege ntị," Marquart na-ekwu. N'ime nke a, ọ na-egosi ókèala ọhụụ nke ihe ga-ekwe omume maka ọtụtụ ndị na-ese ihe.
Lifelike ga-adị na TIDAL ma dịkwa maka nbudata Atmos na ImmersiveAudioAlbum.com. Ọzọkwa, a ga-enwe mmemme iyi mmiri dị egwu na-abịa, ụbọchị ekwuputara.
Previous: Telestream naputara ozo nke Wirecast
Osote: nxtedition na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe